भोलि मंसिर ३ गते शताब्दीकै ठुलो चन्द्रग्रहण, हेर्नुस भुलेर पनि यस्ता काम गर्न हुँदैन् ! – हाम्रो देश
भोलि मंसिर ३ गते शताब्दीकै ठुलो चन्द्रग्रहण, हेर्नुस भुलेर पनि यस्ता काम गर्न हुँदैन् !
आगामी मंसिर ३ गते करिब ६ शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म चन्द्रग्रहण लाग्दै छ । नोभेम्बर १९ मा लाग्ने यो चन्द्रग्रहण सन् २०२१ को अन्तिम चन्द्र ग्रहण हुनेछ । पछिल्लो ५८० वर्षमा पहिलो पटक यति लामो अवधिको चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । यो पटकको चन्द्र ग्रहणमा चन्द्रमाको ९७ प्रतिशत भाग ढाकिनेछ । जो दिउँसो करिब साढे १ बजे उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ । यो चन्द्रग्रहण ३ घण्टा २८ मिनेट २४ सेकेन्ड लामो हुनेछ ।
५८० वर्ष यता यति लामो अवधिको चन्द्रग्रहण लागेको थिएन । यसअघि सन् १४४० को फेब्रुअरी १८ मा सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण लागेको थियो । अब यति लामो चन्द्रग्रहण ८ फेब्रुअरी २६६९ मा मात्र लाग्नेछ । यो चन्द्र ग्रहण एसिया, अमेरिका, उत्तरी युरोप, अस्ट्रेलिया तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र लगायतबाट देखिनेछ ।